November 2012 ~ IT Guide Myanmar
POWER DIRECTOR သုံးပြီး DVD ဘန်းရာတွင် အရည်အသွေးကောင်းကောင်းရအောင် ဘန်းနည်း
2:40 AM Video တည်းဖြတ် 1 comment
ကျနော့ရဲ့ လေးစားရပါသော ဘလော့မိတ်ဆွေများအားလုံး မင်္ဂလာပါ ။
POWER DIRECTOR သုံးပြီး DVD ဘန်းရာတွင် အရည်အသွေးကောင်းကောင်းရအောင် ဘန်းနည်းခေါင်းစဉ်နဲ့
မေးထားတာလေးကို ဆွေးနွေးတဲ့အနေနဲ့ ပို့(စ်)တင်ပေးထားတာပါ ။
ပထမဆုံး ရိုက်ထားတဲ့ video format အမျိုးအစား NTSC လား PAL လား
NTSC နဲ့ရိုက်ထားတာကို PAL နဲ့မထုတ်ပါနဲ့ - ဒီနည်းအတိုင်းပဲပြောင်းပြန်ယူပေါ့
NTSC မှာ ၁ စက္ကန့်ကို ၂၉.၇၉ ဖရိမ်ရှိပါတယ်(၂၉.၇၉-ပုံ)
PAL မှာတော့ ၁ စက္ကန့်ကို ၂၅ -ပုံရှိပါတယ် အဲဒါကြောင့် ပါ ။ မရဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် QT ကျသွားတတ်လို့ပါ ။
ကွာလတီမကျသွားအောင်လုပ်တဲ့နည်းတွေ ဆော့ဝဲတွေရှိပါတယ် အရမ်းကိုအချိန်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မတန်ပါဘူး လိုအပ်ရင်တော့ လုပ်ရမယ်ပေါ့
နောက်တစ်ခု ဗွီဒီယိုရိုက်တဲ့စက်ရဲ့ ပုံရိပ်ဖမ်းယူနိုင်မှုအရည်အသွေးနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ် ။
နောက်တစ်ခုကတော့ VIDEO GRAPHIC CARD အမျိုးအစားနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ် ။
အောက်ကပုံကတော့ Canon အမျိုးအစားနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုရဲ့ Properties ကို ဥပမာပြထားပေးတာပါ ။ အဲဒီမှာ .MTS က ဗွီဒီယို format ၊ AVCHD က ဖိုင်အမျိုးအစား
1440 1080 က ဗွီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှုံး
25 fps ကအပေါ်ကပြောခဲ့သလို ၁ စက္ကန့်အတွင်းမှာ ဖြတ်ပြေးသွားတဲ့ရုပ်ငြိမ်ရုပ်ပုံပေါင်း
အောက်ကပုံကတော့ Edit >Preferences
အနီရောင်နဲု့ ကွင်းပြထားတဲ့နေရာတွေကို သတိပြုပေးပါ ။ မိမိရဲ့ စက်မှာ ဘယ် Setting နဲ့ ရိုက်ခဲ့သလဲ TV FORMAT 4:3 လား Widescreen 16:9 လားဆိုတာပါ ။ အရေးကြီးပါတယ် ။
အောက်ကပုံက 4:3 ကိုရွေးပြထားတာပါ ။ သူ့အချိုးအစားနဲ့သူတည့်ရပါတယ် ။
အောက်ကပုံက Widescreen 16:9 ကို ရွေးပြထားတာပါ ။
အပေါ်ကပုံတွေမှာလို Setting လုပ်ပြီး Burn ကြည့်ပါ ။ အရည်သွေးကောင်းကောင်းလေးရမှာသေချာပါတယ် ။ အချိန်ကိုတော့ ၁း၂၀ ထက်တော့မကျော်စေနဲ့ပေါ့ ။ Burn လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး ။
အချိန်တွေအများကြီးကျော်နေလို့ ဘန်းလို့ရအောင်လုပ်ချင်ရင်တော့ Smart Fit ဆိုတဲ့ ချက်ဘောက်ကို အမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပါ ။DVD 5,DVD 9....... နဲ့ FIT ဖြစ်အောင် BURN ပေးပါလိမ့မယ် ။ အရည်အသွေးကတော့ကျမှာသေချာပါတယ် ။
Screenshot တွေအားလုံး POWER DIRECTOR 11 နဲ့ လုပ်ထားတာပါ ။ 9,10 ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း interface သိပ်မကွာပါဘူး
11 ကိုလိုချင်ရင်တော့ အောက်ကလင့်တွေမှာဒေါင်းလိုက်ပါ ဘာကီးမှထည့်စရာမလိုပါ ။
အဲ..အသုံးမပြုခင် System Requirement လေးတော့သွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော် ကိုယ့်စက်နဲ့ အဆင်ပြေမပြေပေါ့ ။
အဲဒီလိုမှမရသေးရင်တော့ Produce ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ AVI အဖြစ်နဲ့ Video ဖိုင်သိမ်း..ရလာတဲ့ Video ဖိုင်ကို
Ulead 11 ထဲဆွဲထည့်ပြီး Burn ၇င်လည်း အရည်အသွေးကောင်းကောင်းရမှာပါ ။
Blog ကိုအလှဆင်ရန် Website များ နှင့် အသုံးဝင်မည့် Website များ
4:22 PM Blog, Blogger, Blogger Tips, Blogger Widget No comments
Blog ကိုအလှဆင်ရန် အောက်ပါ Website များ
အင်တာနက်မှာ Blog ရေးသားသူတွေ၊ အခမဲ့အသင့် Website ဖန်တီးသူတွေအတွက် မိမိတို့ရဲ့ Website
(or) Blog ကိုအလှဆင်ရန် အောက်ပါ Website များကို ဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Website တွေထဲမှာ မိမိဖန်တီးလိုတာတွေ တော်တော်များများပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။
Ref: Fwd Mail မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
Posted by yemintun86@gmail.com at 4:57
http://www.mmitd.com/မြန်မာ အိုင်တီ ဖွံ့ဖြိုးမှု
http://myanmaritpros.com/ ကွန်ပျူတာ အမေးအဖြေများလေ့လာရန်….
http://chitoophoto.blogspot.com/ blog နှင့် I T နည်းပညာ
http://www.deathclock.com/index.cfm ကိုယ်ဘယ်နေ့သေမလဲ သိချင်ကြပါသလား….
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=6af78d8a85&view=att&a......…… ကွန်ပြူတာအတွက် နောက်ခံ ကိုယ့်ပုံနဲ့ မြင်ကွင်း…
http://sharingtofrds.blogspot.com/ နည်းပညာ အတွက် လေ့လာရန်…
http://photofunia.com/ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မြင်ဖို့….
http://www.ebooksbank.com/ E-Books တွေကူးဖိူ့…
http://www.books-hive.com မြန်မာ E-books တွေ….
http://www.mcpa.org.mm/ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်းရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်…
http://www.reader.google.com Google reader တဲ့ဟေ့
http://www.messx.net/download.php English - Myanmar အဘိဓာန် Software…(ဖုန်း ၊ PC တွေအတွက်ပါ ရတယ်..ဟဲဟဲ ပိုက်ဆံတော့ ဆောင်ထားပေါ့..)
http://dictionary.all-channel.com/ English - Myanmar - English Online အဘိဓာန်…(၁)
http://www.ayinepan.com/literature/dictionary/ English - Myanmar အဘိဓာန်စာအုပ်….
http://www.monywa.org/fonts/index.htm English - Myanmar ဖောင့်များ…..
http://www.ifile.itdl httpifile.itdl httpifile.itu4kzjd7this_is_a_test.txt) mp3 လုပ်ရန်ဆော့ဝဲရှာ
http://www.eainmathlaing.com OR http://energy08.egihosting.com/22109 သီချင်းတောင်းလို့လည်းရတယ်ဒီ accout ကို invite လုပ်လိုက်ပါ
ဆော့လို့တော့ကောင်းတယ်ဗျ သူဂိမ်းက Life style အတိုင်းပဲ
http://multiply.comuserjoinreplyform=1 ကွန်ပြူတာအကြောင်းလေ့လာရန် http://kozaw357.multiply.com
http://code.google.compwxpydict မြန်မာလိုရော၊ အင်္ဂလိပ်လိုရော အသုံးပြုပြီး ရှာဖွေနိုင်သည်
http://taryarpwagye.ning.com ရွှေကျွန်းသား သို့ လာရောက်လည်ပတ်သူအပေါင်း ကျမ်းမာ ချမ်းသာ ကြပါစေ
http://mprcommunity.ning.comprofilesblognew Myanmar Punk Rock Community ၀ဒ်ဆိုက်အသစ် ဘလော့ထဲ့ရန်
http://chocolatemyotaw.ning.com မြို့တော် ၀ဒ်ဆိုက်
သူငယ်ချင်း ပို့ပေးတာကို ပြန်လည်ဝေမျှပါတယ်...အဆင်ပြေပါစေနော်..
Posted by yemintun86@gmail.com at 5:00 PM
Posted by မိုးဟိန်း at 09:43 No comments:
Windows 8 မှာ Start Menu ကို Classic Style သို့ အလွယ်ပြောင်းနည်း
12:09 AM နည်းလမ်းများ No comments
ကျနော့ရဲ့ ဘလော့မိတ်ဆွေများထဲက ဝင်းဒိုး ၈ ကိုပြောင်းသုံးခြင်း ဒါမှမဟုတ် Windows 8 Developer Preview စမ်းသပ်သုံးစွဲမှု မျိုး ရှိပြီးကြပြီလို့ ကျနော်ယူဆပါတယ် ။
ကျနော်ယုံကြည်တာကတော့ ပရိုဂရမ်တွေကို ခေါ်ယူသုံးစွဲတဲ့ အခါမှာ နည်းနည်းကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေကြပါလိမ့်မယ် ။ အထူးသဖြင့် (Start Menu) ကိုအသုံးပြုကြရာမှာ
ဝင်းဒိုးဗားရှင်းအဟောင်းတုန်းကလိုမဟုတ်ပဲ ဘယ်နေရာကို နှိပ်ပြီး ဘယ်ကနေ ဝင်ရမှန်းမသိဖြစ်နေကြမှာပါ ။ ဒါကြောင့်ပဲ ဒီနေ့တော့ Window Regestry က Text Editor ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလေးတွေလုပ်ပြီး ဘယ်လိုလွယ်ကူအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့နည်းလေးကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
ဝင်းဒိုးမျက်နှာပြင်ရဲ့ဘယ်ဘက်အောက်ဒေါင့်မှာ မောက်(စ်)ပွိင့်တာ လေးကိုသွားထားလိုက်ရင် ပုံပါအတိုင်း Menu တက်လာပါက Search ခေါင်းစဉ်ကိုနှိပ်ပါ ။
Search Apps အကွက်ထဲမှာ Regedit လို့ ရေးလိုက်ပြီး ဘယ်ဘက်အခြမ်းကိုသတိထားကြည့်လိုက်ပါ regedit ဆိုတာတက်လာရင် နှိပ်လိုက်ပါ ။
UAC သတိပေးမက်ဆေ့(ဂ်ျ)တက်လာရင် Yes ကိုနှိပ်ပါ ။
Registry Editor မျက်နှာပြင်တက်လာရင် အောက်ကဖိုင်လမ်းကြောင်း အတိုင်း သွားလိုက်ပါ ။
ပြီးနောက် RPEnabled ကို Double Click ပေးပြီး Value data: 1 ကို0ပြောင်းပေးလိုက်ပါ ။ OK နှိပ်ပြီး Registry Editor ကိုပိတ်လိုက်ပါ ။
အဲဒီလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလေးလုပ်ပေးလိုက်ယုံနဲ့ Rastart ချစရာမလိုပဲ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Start Menu ကို
Window ဗားရှင်း အဟောင်းတုန်းကအတိုင်း ပြန်အသုံးပြုလို့ရသွားမှာပါ ။
1965 ခုနှစ်ထုတ် ဝင်ဆန့်မှု5MB ရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး HARDDISK
9:07 PM ဗဟုသုတ No comments
IBM 305 RAMAC ဆိုတဲ့ကမ္ဘာ့ ပထဦးဆုံး HARDDISK အသုံးပြုတဲ့ကွန်ပြူတာကို 1956 ခုနှစ်တုန်းက ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီကွန်ပြူတာက ရေခဲသေတ္တာ တစ်လုံးထက်တောင်ကြီးပါတယ် ။ HARDDISK DRIVE ထဲမှာ PLATTER ဓါတ်ပြားပေါင်း အပြား 50 ပါပြီး ဓါတ်ပြားတစ်ပြားစီရဲ့အကျယ်ကတော့ 24 လက်မရှိပါတယ် ။ ဒီဟတ်ဒစ် ရဲ့ သိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ Dataဆိုဒ်က5MB ရှိပါသတဲ့ ။
ပထမဦးဆုံး PC ကိုတော့ 1980 ခုနှစ်မှာ Seagate Technology ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ် ။
အဲဒီ PC မှာ သုံးထားတဲ့ ဟတ်ဒစ်ရဲ့ အရွယ်အစားဟာ ဒီနေ့မျက်မှောက်ကာလမှာ ကျနော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ ဟတ်ဒစ်တွေထက် နှစ်ဆပိုကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဝင်ဆန့်မှုကတော့5MB ပဲရှိတုန်းပါပဲတဲ့ ။
ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ 1 GB ရှိတဲ့ HARDDISK ကို IBM ကထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ အလေးချိန် ပေါင် 550 ရှိပြီး ဒေါ်လာ 40,000 တောင်တန်တယ်လို့ဆိုပါတယ် ။
ဝင်းဒိုး 8 Transformation Pack လေးပြန်ရှဲ ပေးလိုက်ပါတယ် ။
Windows 8 Transformation Pack 6.0 က သင့်ရဲ့ Window 7/Vista/Xp တွေရဲ့ Interface များကို
Windows 8 ဒီဇိုင်းဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးပါလိမ့်မယ် ။ Window 8 Boot screeen,Login Screen,Themes, Wallpapers, Icons, Sounds, Fonts, Metro UI, Aero’s Auto-Colorization, Taskbar UserTile တွေနဲ့ အခြားစွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေများစွာပါဝင်ပါတယ် ။
What’s new in 8TP v6.0
Windows 8 Transformation Pack 6.0 Free | Sendspace - 47 MB
Windows 8 Transformation Pack 6.0 Free | Box - 47 MB
မူရင်း - MZOonline